Onye Okacha mma na Usability and Design: Onehub
Dịka blọgụ b-ndepụta, ị na-abụkarị ndị ọchụnta ego azụmaahịa, ndị mmepe sọftụwia, na ndị na - achọ ngwa ọrụ achọ ka ị kwalite ngwaahịa ha. M hụrụ n'anya na-iche nke a ntị, ezie, n'ihi na m hụrụ n'anya na-agụ akwụkwọ na m hụrụ n'anya na-ahụ ngwa si na ahịa. Dịka onye njikwa ngwaahịa, amaara m etu o siri sie ike iwere ngwa nwere ike ma gbanwee ya na ngwa dị ebube. Ọ bụghị mgbe niile, kama ọ bụla
Thursday, January 24, 2008 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Ka m Tweet na Twitter na Snitter, M na-agbalị Twoosh. Twooshing na Snitter dị mfe n'ihi na Snitter si Snook na-abịa na Snurl. Gịnị? Kedu ihe n'ụwa bụ lingo ọhụrụ a? Ebe a na-aga ihe ọ bụla… mgbe azụ m sonyeere Twitter. Twitter bụ ihu ọma ụlọ nkata ebe onye ọ bụla nwere ike ịgwa onye ọ bụla (enwere ụfọdụ atụmatụ nzuzo). Mgbe ị biputere okwu ma ọ bụ nzaghachi na Twitter, a maara ya dị ka Tweet. Na-eme ihe ọchị?